Publiclọ - China Zhenyuan Steel Structure Engineering Co., Ltd.
Ihe gbasara oghere, nhazi ọrụ, nzukọ igwe mmadụ na mwepu nke ụlọ ọha, yana mmesho, ọdịdị na gburugburu ebe obibi (oke, ọdịdị na ogo) nke oghere. N'ime ha, ihe elebara anya bụ ọdịdị nke iji ihe owuwu ụlọ na imezi ihe.
Ọ bụ ezie na ọdịdị na ụdị ojiji nke ụlọ ọha ọha dị iche iche, ha nwere ike kewaa ụzọ atọ: akụkụ bụ isi, akụkụ nke abụọ (ma ọ bụ akụkụ inyeaka) na akụkụ njikọ okporo ụzọ. N'ime imewe ahụ, anyị kwesịrị ibu ụzọ ghọta mmekọrịta nke akụkụ atọ a maka nhazi na nchikota, ma dozie esemokwu dị iche iche n'otu n'otu iji nweta ezi uche na izu oke nke mmekọrịta ọrụ. Na mmekorita nke mmekorita nke uzo ato a, nkesa uzo uzo uzo na aru oru.
Enwere ike kewaa akụkụ njikọ okporo ụzọ n'ụzọ atọ dị iche iche: okporo ụzọ dị larịị, okporo ụzọ kwụ ọtọ yana okporo ụzọ.
Igodo isi nke okirikiri nhọrọ ukwuu:
Ọ kwesịrị n'ụzọ kwụ ọtọ, gbochie ntụgharị na ntụgharị, nwee njikọ chiri anya na akụkụ ọ bụla nke ohere ahụ, ma nwee ọfụma ìhè na ọkụ. Iji maa atụ, ịga ije.
Isi Ihe Nke Okpokoro Mberede okporo ụzọ:
Ọnọdụ na ọnụọgụ na-adabere na mkpa ọrụ yana mkpa ọgụ ọgụ. Ọ ga-adị nso na ebe a na-ebugharị njem, a haziri ya yana isi ihe na nke abụọ, ma dabara adaba maka ọnụọgụ ndị ọrụ.
Isi Ihe Nke Ulo Oru nke Transportation Hub:
Ọ ga-adaba adaba iji, dabara adaba na oghere, nwee ezi uche n'usoro, dabara na mma, akụ na ụba ma dị irè. Ma ojiji ọrụ na ihe okike nke ịtụrụ ime gbasara ohere ga-ebu n'uche.
Na imewe nke ụlọ ọha, na-atụle nkesa nke ndị mmadụ, mgbanwe nduzi, ntụgharị nke oghere na njikọ na aisles, steepụ na oghere ndị ọzọ, ọ dị mkpa iji dozie ụlọ nzukọ na ụdị ohere ndị ọzọ iji rụọ ọrụ nke ogige njem na ntụgharị ohere.
Ebumnuche nke ọnụ ụzọ na ụzọ ọpụpụ nke ọnụ ụzọ mbata ahụ dabere na ihe abụọ achọrọ: otu bụ ihe achọrọ maka ojiji, nke ọzọ bụ ihe achọrọ maka nhazi oghere.
Zoning Ọrụ nke oflọ Ọha:
Echiche nke zoning ọrụ bụ ịkekọrịta oghere dị ka ọrụ dị iche iche chọrọ, na ikpokọta ma kewaa ha dịka ịdị nso nke njikọ ha;
Principleskpụrụ nke iji rụọ ọrụ nkewa bụ: nzụta doro anya, kọntaktị dabara adaba, na ndokwa dabara adaba dịka njikọ dị n'etiti isi, nke abụọ, nke ime, mpụga, mkpọtụ na jụụ, nke mere na onye ọ bụla nwere ebe nke ya; N'otu oge ahụ, dịka ihe eji eme ihe, a ga-ahazi ọnọdụ dịka usoro nke ndị mmadụ si arụ ọrụ. Ngwakọta na nkewa nke oghere ga-ewere ohere nke isi dị ka isi, na nhazi nke oghere nke abụọ ga-enye aka na-arụ ọrụ nke isi oghere ọrụ. Oghere maka kọntaktị mpụga ga-adị nso na njem ụgbọ njem, na ohere maka iji ya rụọ ọrụ ga-adịtụ ezo. A ga-edozi njikọ na iche nke oghere n'ụzọ kwesịrị ekwesị na ndabere nke nyocha miri emi.
Kpọpu ndị mmadụ n'ụlọ ọha:
Kpọpu mmadụ nwere ike kewaa n'ime ọnọdụ nkịtị na ọnọdụ mberede. Enwere ike kewaa nkpụpụ nkịtị ka ọ gaa n'ihu (dịka ụlọ ahịa), etiti (dịka ihe nkiri) yana jikọtara (dịka ụlọ nzukọ ngosi). Mbupụ mberede na-etiti.
Mbupute nke ndị mmadụ n'ụlọ ọha ga-adị larịị. A ga-atụle ntọala nke ebe nchekwa na hub, ọ ga-agbasasịkwa nke ọma mgbe ọ dị mkpa iji gbochie mkpọchi oke. Maka ọrụ na-aga n'ihu, ọ kwesịrị ka ịtọlite ​​ọpụpụ na ọnụọgụ iche. Dabere na koodu mgbochi ọkụ, a ga-atụle oge mkpofu kpamkpam wee gbakọta ikike okporo ụzọ.
Nkwenye nke ukwu, ụdị na ogo nke otu oghere:
Ogo, ikike, ọdịdị, ọkụ, ikuku ikuku, anwụ, okpomọkụ, iru mmiri na ọnọdụ ndị ọzọ nke otu oghere bụ isi ihe kwesịrị ekwesị, ma bụrụkwa akụkụ dị mkpa nke nsogbu ọrụ ụlọ, nke a ga-atụle nke ọma na imewe.
Publiclọ ọha na eze gụnyere ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ gọọmentị, wdg. Buildingslọ azụmahịa (dịka ụlọ ahịa na ụlọ akụnụba), ụlọ ndị njem nleta (dịka ụlọ oriri na ọ entertainmentụ andụ na ebe ntụrụndụ), sayensị, agụmakwụkwọ, ọdịbendị na ụlọ ahụike (gụnyere ọdịbendị, agụmakwụkwọ, nyocha sayensị, ọgwụgwọ ahụike, ahụike, ụlọ egwuregwu, wdg), ụlọ nkwukọrịta (dịka post na nkwukọrịta, nkwukọrịta, ebe data na ụlọ mgbasa ozi), ụlọ njem (dịka ọdụ ụgbọ elu, ọdụ ụgbọ oloko dị elu, ọdụ ụgbọ oloko, ọdụ ụgbọ oloko na ọdụ ụgbọ ala) na ndị ọzọ
Osimiri n'ọdụ ụgbọ mmiri
Shopslọ ahịa n'okporo ámá